FIFANDONANA TANY ANATY ALA :: Jiolahy roa lavo, avotra ilay zokiolona natao takalon'aina • AoRaha
FIFANDONANA TANY ANATY ALA Jiolahy roa lavo, avotra ilay zokiolona natao takalon’aina
Tafaverina amin’ny fianakaviany, tamin’ny alahady, rehefa avy notazonin’ny mpaka an-keriny nandritra ny dimy andro ity lehilahy, fitopolo taona, nataon’ny jiolahy takalon’aina tany Mangataboahangy Ambatofinandrahana. Votsotra, taorian’ny fifandonana teo amin’ireo olon-dratsy sy ny mpitandro filaminana io zokiolona io. Lavon’ny bala ny roa tamin’ireo jiolahy.
Vola efatra tapitrisa ariary no notakian’ireo jiolahy tamin’ny fianakaviana ho solon’ny famerenana an’ilay lehilahy lehibe. Nitaraina tamin’ny mpitandro filaminana ireo lasibatra. Nandray ny andraikiny ny zandary. Notadiavina ny toerana mety ho fieren’ireo olon-dratsy. Fantatra taorian’ny fanomezam-baovao avy tamin’ny olon-tsotra fa ao anaty alabe iray no misy an’ireo mpaka an-keriny. Nifanehitra tao ny roa tonta, ny alahady lasa teo. Naharitra telopolo minitra teo no ho eo ny fifampitifirana tao anaty ala. Nirifatra nandositra, rehefa nahatazana ireo roa lahy maty voatifitra ireo andian-jiolahy.
Votsotra tsy nandoavam-bola araka izany ilay zokiolona natao takalon’aina. Naratra izy, taorian’io fifandonana mahery vaika io. Nahitana basy iray fitondra mihaza sy basy lava vita tanana teny amin’ireo olon-dratsy roa lavo.
KITRA AMINA TORA-PASIKA :: Hiverina hiady toerana amin’i Côte d’Ivoire i Madagasikara
FIKASIHAN-TANANA MPANDALO :: Mpianakavy saika nidiran-doza